किन हामी रिब्रेन्डेड र Martech.zone मा हाम्रो डोमेन परिवर्तन गर्नुभयो Martech Zone
शब्द ब्लग एक चाखलाग्दो छ। वर्षौं पहिले, जब मैले लेखें डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि।, म यो शब्द मन पराउँछु ब्लग किनभने यसले व्यक्तित्व र पारदर्शिताको भावनालाई दर्साउँछ। कम्पनीहरूले अब उनीहरूको संस्कृति, समाचार, वा प्रगतिहरू प्रकट गर्न समाचार पिचिंगमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनु पर्दैन। तिनीहरू आफ्नो कर्पोरेट ब्लग मार्फत प्रसारण गर्न सक्दछन् र सामाजिक मिडिया मार्फत एक समुदाय निर्माण गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूको ब्रान्ड इको थियो। समयको साथ तिनीहरू श्रोताहरू, समुदाय र वकालत बनाउन सक्थे।
कम्पनीहरूले यो जानकारी उनीहरूको सम्पत्ती भन्दा बाहिर साझेदारी गर्न सक्षम थिए (स्वामित्व मिडिया), जबकि। तिनीहरूसँग अन्य प्रकाशनहरूमा उनीहरूको आवाज सुन्न सक्ने अविश्वसनीय अवसरहरू पनि छन् (कमाएको मिडिया)। दुबै, पक्कै पनि, साझा गरिएको सम्भावना छ (सामाजिक संजाल) वा भुक्तान गरीएको र पदोन्नती गरिएको (सशुल्क मिडिया)। अवधि कर्पोरेट ब्लगि सीमित थियो, र सर्त सामग्री मार्केटिङ कम्पनीले स्वामित्व मिडिया, अर्जित मिडिया, सामाजिक मिडिया, र भुक्तान मिडिया स्रोतहरू मार्फत डिप्लोयमेन्ट रणनीतिहरू कभर गर्नको लागि विगत। बर्षमा नेतृत्व लिए। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उही सटीक पुस्तक लेखिएको थियो तर यसलाई डम्मीका लागि सामग्री मार्केटि called भनिन्थ्यो ... यो समयको परीक्षामा खडा हुने थियो। तर शब्द ब्लग यसको जीवनकाल सीमित।
हाम्रो साइटको नाम हो Martech Zone URL मार्केटिंग टेकब्लॉग.कटको साथ। म मेरो साइटमा त्यहि काम गर्दै थिए जुन मैले मेरो पुस्तकको साथ गरेको थिएँ। अवधि ब्लग समान प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गरियो। अवधि ब्लग वृद्ध, व्यक्तिगत, र पेशेवर जस्तो लाग्दैन। मैले साइटलाई निरन्तर रूपमाaको रूपमा उल्लेख गरें प्रकाशन। अरूले उनीहरूको ब्लगको रूपमा सन्दर्भ गर्दछ डिजिटल म्यागजिनहरू। यद्यपि मलाई डोमेन परिवर्तन हुने डर छ किनकि सबै सर्च ईन्जिन अधिकारका कारण मैले त्यस डोमेनमा निर्माण गरेको थिएँ, त्यसैले कहिले पनि यसलाई अपडेट गर्ने हिम्मत गरेन। हालसालै सम्म, जब Google ले redirects लाई सजाय दिन रोक्छ र एक थप्यो सर्च कन्सोलमा डोमेन परिवर्तन संयन्त्र.
हामीलाई हाम्रो डोमेन साझेदारी गर्न पनि गाह्रो थियो। हामीले जहिले पनि मार्केटिंग-टेक-ब्ल्ग-डट-कम भन्नुहुन्थ्यो र यसलाई छलफल गर्ने बेलामा मानिसहरूलाई यो हिज्जे कुरा गर्नुपर्दछ। यो डोमेन होईन जुन केवल जिब्रोमा पल्टाइयो र यूआरएलमा अनुवाद गर्न सजिलो थियो जुन व्यक्ति याद गर्न सक्दछ र ब्राउजरमा टाइप गर्न सकिन्छ। मार्टेक बिक्री र मार्केटिंग सम्बन्धित टेक्नोलोजी र समाधानहरूको लागि उद्योग-स्वीकृत शब्द भएको छ।
मैले मार्टेक सम्बन्धित डोमेनहरूको लागि खोजी गरे जुन सम्झन सजिलो थियो हुन सक्छ ... र अन्तमा भयो Martech.zone (हामीसँग मार्केटिंग.टेक्नोलॉजी छ तर त्यो धेरै लामो छ)।
परिचय Martech Zone
हामीले धेरै कम्पनीहरूलाई नयाँ डोमेनहरूमा सर्नका लागि मद्दत ग .्यौं र उनीहरूको दर्जा क्रमशः सामान्य गरी फर्कियो। यो हाम्रो लागि समय हो त्यसैले मैले प्लग ताने - एक दशक पछि - शुक्रवार। यो मुख्यतया केहि चीजहरू बचत गर्न सजिलो माइग्रेसन भएको छ।
तपाइँ कति पटक आफ्नो प्रयोगमा छक्क पर्नुहुनेछ डोमेन नाम प्रोफाइल र तेस्रो-पार्टी साइटहरूमा! मलाई लाग्छ मैले हजारौं साइट हस्ताक्षर र रेजिष्ट्रेसन साइटहरूमा यो प्रयोग गरेको छु। यो वास्तविक आँखा खोल्ने भएको छ!
हाम्रो पुरानो लिंक र डोमेन एक पछाडि थिए एसएसएल प्रमाणपत्र। नतिजाको रूपमा, हामी केवल हाम्रो साइटमा उपनाम मात्र फाल्न र मानिसहरूलाई पुनःनिर्देशित गर्न सक्दैनौं। हामीले हाम्रो पुरानो डोमेनको साथ दोस्रो साइट होस्ट गर्नुपर्‍यो, प्रमाणपत्र स्थापना गर्नुपर्‍यो, र नयाँ डोमेनमा स्थायी पुनःनिर्देशन गर्नुपर्‍यो। हामीले छविहरूका साथ यसो गर्नुपर्नेछ किनकि हामीसँग ईमेल र मोबाइल अनुप्रयोगहरू मार्फत केहि सन्दर्भित यूआरएलहरू छन्। म अझै पनी प्रभाव देखिरहेको छु।
हामीले हाम्रो सबै हरायौं सामाजिक लिंक शेयर गणना। म यसको बारेमा धेरै चिन्तित छैन, र हामीले सेयर गणना सार्वजनिक गर्न रोक्दछौं। म छक्क पर्दछु कि छोटो पार्ने प्लेटफर्महरू र सामाजिक प्लेटफर्महरू कुनै पनिले लि follow्कलाई पछ्याउँदैन जुन खोज इन्जिनले गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि निम्न URL हरू उनीहरूको डेटा सफा राख्न राम्रो चीज हुनेछ।
त्यसैले त्यहाँ तपाईं यो छ! अब हामी हाम्रो सबै गुणहरू र सामाजिक साइटहरू नयाँ ब्रान्डिporate ... हाम्रोमा प are्क्तिबद्ध गर्दैछौं मार्टेक प्रकाशनहाम्रो Martech Zone साक्षात्कार पोडकास्ट, र हाम्रो Martech सामाजिक च्यानल (हामी कसरी हेर्नुहोस् परिवर्तन गरिएको ट्वीटर अनुयायीहरू गुमाए बिना)!
विदाई Martech Zone र नमस्कार Martech Zone!
टैग: ब्रान्डिङडोमेन परिवर्तन गर्दैडमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि।डोमेन परिवर्तनमार्केटिंग टेक ब्लगमार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लगमार्केटिंग टेकब्लगमार्टेकमार्टेक ब्लगmartech zoneस्थायी पुनःनिर्देशनएसईओ
कसरी प्रभावकारी सम्बन्धको साथ डिजिटल रूपान्तरणको मालिकाना
जनवरी 29, 2017 8:08 बजे